USihlalo weSigqeba seeNdawo zeeNdawo zoLuntu esaziwa njengeNkokeli yeNdwendwe kwiHlabathi liphela
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba kunye neehotele » USihlalo weSigqeba seeNdawo zeeNdawo zoLuntu esaziwa njengeNkokeli yeNdwendwe kwiHlabathi liphela
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • abantu • Resorts • News Sustainability • Tourism • Iindaba zeWired Travel
UAdam Stewart ujoyina iKomiti eLawulayo yeWTTC
Usihlalo oLawulayo weSandals Resorts, u-Adam Stewart, umenyiwe ngokusesikweni ukuba ajoyine iKomiti Elawulayo ye-World Travel & Tourism Council (WTTC). Ukungeniswa kubonisa utshintsho olusebenzayo kunye nokuqhubela phambili okwenziwe nguStewart ngalo lonke ixesha lakhe kolu shishino.
I-WTTC imele icandelo labucala lezoKhenketho noKhenketho kwihlabathi liphela kunye namalungu kubandakanya ii-CEO ezingama-200, izihlalo kunye nabaongameli.
UAdam uzisa kuye ubutyebi bamava ngokusebenza ngokusondeleyo notata wakhe ongasekhoyo ekwakheni ngoku, enye yeempawu ezaziwayo kwishishini lethu.
UStewart uthembise ukuba uza kuqhubeka nokukhuthaza ushishino oluzinzileyo nolubandakanya bonke abantu kunakuqala.
“Ndiwongekile ngokujoyina iKomiti Elawulayo yombutho endiwuhloniphileyo oko kwaqala umsebenzi wam,” utshilo UAdam StewartSihlalo oLawulayo Iimbadada Zonke iiNdawo ekuchithelwa kuzo iiholide, “Eli qela lobunkokeli ligxile kumdla wecandelo lokhenketho nokhenketho, kwaye ndinomdla wokufaka isandla. Sisonke, sizakuqhubeka nokukhuthaza ushishino oluzinzileyo nolubandakanya wonke umntu kunangaphambili, sikhumbuza amashishini aselumelwaneni kunye noorhulumente bamazwe ngamazwe ukuba uhambo yinto ebalulekileyo ebomini. ”
I-World Travel & Tourism Council imele icandelo labucala lezoKhenketho noKhenketho kwihlabathi liphela. Amalungu abandakanya ii-CEO ezingama-200, Izitulo kunye noMongameli weenkampani ezihamba phambili kwezoKhenketho nezoKhenketho ezivela kuwo onke amajografi agubungela onke amashishini. Ngaphezulu kweminyaka engama-30, i-WTTC izinikele ekuphakamiseni ukuqonda koorhulumente noluntu ngokubaluleka kwezoqoqosho nakwezentlalo kwicandelo loKhenketho noKhenketho.
UJulia Simpson, uMongameli kunye ne-CEO yeWTTC uthe:
“Ndiyavuya ukwamkela uAdam kwiKomiti Elawulayo yeWTTC. UAdam uzisa kuye ubutyebi bamava ngokusebenza ngokusondeleyo notata wakhe ongasekhoyo ekwakheni ngoku, enye yeempawu ezaziwayo kwishishini lethu. Mna kunye nosapho lonke lwe-WTTC sijonge phambili ekusebenzeni noAdam kwindima yakhe entsha. ”
UAdam noyise u "Butch" uStewart
Umbono wokuqala wamalungu okusekwa kwebhunga uhlala unjalo: oorhulumente kufuneka babone ukuhamba nokhenketho njengeyona nto iphambili, ishishini kufuneka lilinganise uqoqosho nabantu, inkcubeko, kunye nokusingqongileyo, kunye nokwabelana okwabelwana ngako ukukhula kwexesha elide. Ubulungu buquka imbonakalo yolu shishino, ukusuka kwiinqwelo-moya ukuya kubaqhubi babakhenkethi ukuya kumaqela okwamkela iindwendwe. IBhunga lesiGqeba liqukethe izihlalo, abaMongameli, kunye nabaPhathi abaPhezulu abavela kwihlabathi lonke lokuhamba kunye nezokhenketho.
Umbutho wokuzithandela, ubunkokheli be-WTTC buseka umzekelo, benikela ngexesha labo elibalulekileyo kunye nezixhobo ukuqhubela phambili umsebenzi wehlabathi kwilizwe elitshintshayo. Iinkokheli zeshishini zimenywe ukuba zijoyine ukuma kweKomiti Elawulayo njengezinto ezisisiseko zotshintsho olusisiseko kunye nokwazisa, ukukhuthaza uhambo olukhuselekileyo nolutyebisayo kwiminyaka eliwaka ezayo.